Aspen Media မှယူနီကာမှ Keep-It-Simple Dante အသံကိုတင်ပြသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Aspen မီဒီယာ Keep-ဒါဟာ-ရိုးရှင်းသော Dante အသံ UNiKA မှစ. Presents
Aspen မီဒီယာ Keep-ဒါဟာ-ရိုးရှင်းသော Dante အသံ UNiKA မှစ. Presents
နည်းပညာအသစ်မကြာခဏယခင်ကရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုရှုပ်ထွေးသည့် overhead သယ်ဆောင်။ AoIP, ဥပမာ, များစွာသောမြင်သာထင်သာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သော stagebox မှအသံစားပွဲပေါ်မှာ၏မိုက်သွင်းအားစုတိုးချဲ့သို့မဟုတ်တစ်ဦးအပိုဆောင်း foldback စပီကာဆက်သွယ်ထားသောအဖြစ်ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်များအခု Laptop ကိုတောင်း software နှင့်အဖိုးတန်အပိုအချိန်အဝေးကနေလမ်းကြောင်းများသတ်မှတ်ပါနှင့်အဆင့်ဆင့်ကိုထိန်းညှိဖို့ ။
အလုပ်ရှုပ်နေအသံနှင့်အ AV စနစ်အင်ဂျင်နီယာများထို့ကြောင့်အသံပစ္စည်းကိရိယာများဖြန့်ဖြူး Aspen Media ကဗြိတိန်မှမိတ်ဆက်ခဲ့ကြကြောင်းကိုစောင့်ရှောက်-It-ရိုးရှင်းသော Dante အသံထုတ်ကုန်များ၏ UNiKA Pro ကိုအသံရဲ့ကြီးထွားလာအကွာအဝေးတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
ခရစ် Collings, Aspen မီဒီယာ၏ Managing Director, says: "ဒီရိုးရှင်းတဲ့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်မဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ရပြီလိုထက်ပိုပြီးကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ analogue အသံဒီဇိုင်းအတွက်ရလဒ်များကြောင့်ဖြစ်၏။ "
UNiKA ရဲ့ Dante input ကိုနှင့် output ကို node များအားလုံးအမြတ်သို့မဟုတ်ကို attenuation ညှိကြောင်းချက်ချင်းလက်လှမ်းရှေ့ panel ကို rotaries feature များနှင့် Phantom ပါဝါကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ် pads ထည့်သွင်းဖို့ခလုတ်တွန်း။ မိုက်ကရိုဖုန်းသို့မဟုတ်စပီကာချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့အသုံးပြုသူများအဆင့်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်နှင့်ပင်လက်ပ်တော့ကိုကြည့်ရန်မလိုပါင်ကဲ့သို့ကွယ်ပျောက်လမ်းလျှောက်စေတစ်ဦးတည်းဆို software ကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကလစ် နှိပ်. လုပ်ပါ။
အကွာအဝေး NBB1616 16ch input ကိုနှင့် output ကို analogue-to-Dante node တစ်ခု၏ UNiKA ထိပ်တန်း configure နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူသည်။ တစ်ခုတည်းကွန်ယက်ကို cable ကိုကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုယူနစ်ရိုးရှင်းတဲ့ Point-to-point bi-directional 16 ရုပ်သံလိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်မြွေဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သို့သော်အားလုံး 32 ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်မှု setting သည့်ယူနစ်တစ်ဦး၏နောက်ဘက်အပေါ်တစ်ခုတည်း button ကိုတစ်ဦးအမြန်စာနယ်ဇင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ NBB1616 အားလုံး analogue ဆက်သွယ်မှုများအတွက် XLRs ရှိပြီးလေးယောက်တိုတောင်းသောကေဘယ်လ်ကြိုးနှင့်အတူအသီးအသီးယူနစ်တစ်ခု NBB32Ex ချဲ့ထွင်ချိတ်ဆက်လိုင်းများ 1616 တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ NBB1616 ကိုလည်းအလွယ်တကူယူနစ်တပ်ဖြန့်နေကြသည်နေရာတိုင်းမှာ 16 သို့မဟုတ် 32 XLR input ကိုနှင့် output ကို channel များကိုပေး, Multi-device ကို Dante ကွန်ရက်များသို့ပေါင်းစည်းထားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ UNiKA အကွာအဝေးလည်းနောက်ထပ်သုံးရိုးရှင်းသော Dante I / O Device များ, အ analogue အသံလမ်းခရီးကိုထိန်းချုပ်ဘို့ rotaries နဲ့ switches တပ်ဆင်ထားအားလုံးပါဝင်သည်။
အဆိုပါ NBB0202R နှင့် NBB04T အသီးသီး stackable လေးရုပ်သံလိုင်း input ကိုနှင့် output ကိုထုတ်ကုန်များမှာနေစဉ် NBB04 တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း desktop သို့မဟုတ် input ကိုနှင့် output ကိုအဆငျ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ rackmountable နှစ်ခုရုပ်သံလိုင်း bi-directional interface ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Aspen မီဒီယာအဆိုပါအသံလွှင့်, တိုက်ရိုက်, Post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းစျေးကွက်များအတွက်အသံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုထုတ်ကုန်များ၏ဗြိတိန်ဖြန့်ဖြူးအတွက်အထူးပြုသည်။ ၎င်း၏လက်ရှိအစုစုကိုအဆင့် Tec သံကိုစာသင်ခုံများနှင့်လမ်းကြောင်း, Jüngerအသံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အသံကျယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, JLCooper ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ interface ထုတ်ကုန် DirectOut Technologies က MADI ကိရိယာများနှင့် Nixer Dante စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ခရစ် Collings အားဖြင့် 1995 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီစက်မှုလုပ်ငန်းဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုစည်းစိမ်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်ထောက်ခံပါတယ်။
Aspen မီဒီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Dante အသံ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows UNiKA ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-09
ယခင်: EditShare ကို Adobe Premiere Pro ကိုလုပ်ငန်း Post ကို-ထုတ်လုပ်မှု Workflows များအတွက်ဖြေရှင်းနည်း၏ Suite ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Dolby Atmos လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ Periscope Post ကို & Audio စျေးပြဇာတ်ရောသမအဆင့်